PHOTOS. Daniel Auteuil ayaa hareereeyay gabdhihiisa Nelly iyo Aurore iyo xaaskiisa Aude Ambroggi si ay u soo bandhigaan filimkiisa cusub - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Daniel Auteuil ayaa hareereeyay gabdhihiisa Nelly iyo Aurore iyo xaaskiisa Aude Ambroggi si ay u soo bandhigaan filimkiisa cusub
TELES RELAY 13 October 2019
Sannad-guuradeeda tobnaad, Bandhigga Lumière ee Lyon wuxuu casuumay shakhsiyaad badan. Waa sariir dhab ah oo xiddigaha la soo ururiyay Sabtida 12 Oktoobar 2019. Waxaa ka mid ah, Daniel Auteuil gaar ahaan si fiican ayaa loo hareereeyay. Aktarka ayaa waxaa la socday labadiisa gabdhood Nelly Auteuil et Aurore Auteuil sidoo kale xaaskiisa Aude Ambroggi. Qoyska, oo aad u dhoola cadeynaya, ayaa sawiray sawirka xaflada furitaanka ee Halle Tony Garnier.
Le aabe seddex caruur ah leh wuxuu ahaa martida sharafta ee iidaanka. Aad buu u qiiro badnaa markii uu soo bandhigayay filimkiisa cusub, Belle Epoque de Nicolas Bedos. Riwaayadan majaajillada ah ee la sii deyn doono bisha 6 ee Nofembar, Daniel Auteuil wuxuu ku sawiray sawir gacmeed shaqo la'aan ah iyo niyad jab kaas oo lasiiyay fursad uu dib ugu soo nooleeyo maalinta 1974 inta lagu gudajiray oo uu la kulmay haweeneyda noloshiisa.
Francis Ford Coppola, Xavier Dolan, Frances McDormand ayaa filayay
Shaqsiyaad kale oo fara badan ayaa goob joog ka ahaa munaasabaddan oo ay soo qaban qaabisay Thierry Frémaux, maamulaha Machadka Lumière iyo ergada guud ee Bandhiga Filimka Cannes. atariishada Frances McDormand, oo ku guuleystay Oscar oo ah jilaayaha ugu wanaagsan ee 2018 for Seddex Biilwaxaa sacabiyay shacabka. Xavier Dolan, Marisa Paredes, Laurent Gerra ama Donald Sutherland sidoo kale goob joog ahaa. Hadana taasi maahan. Bandhigga, oo soo bandhigaya wax aan ka yarayn filimada 159 ayaa la xiri doonaa Francis Ford Coppola.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-daniel-auteuil-entoure-de-ses-filles-nelly-et-aurore-et-de-sa-femme-aude-1035698
Hindiya: Kafirs xoog qayb ayaa lagu xiray Srinagar, koonfurta Kashmir | Wararka Hindiya
Martida RTL Soir du 21 Noofambar 2019 - VIDEO